Voka-pifidianana vonjimaika: mitarika mazava ny kandidà Rajoelina | NewsMada
Raha ny voka-pifidianana vonjimaika tonga eny anivon’ny Ceni, hatramin’ny fotoana nanoratana, mitarika mazava ny kandidà Rajoelina Andry. Manaraka akaiky azy eo ny kandidà Ravalomanana. Any amin’ny laharana fahatelo na latsaka ambany kosa ny kandidà Rajaonarimampianina.
Misongadina sy mitarika ny mpanorina ny IEM amin’ny faritra sasany, indrindra ny any amin’ny faritra. Anisan’izany ny any Toamasina, mitarika 234 na 200 ny kandidà Rajoelina amin’ny birao fandatsaham-bato (BV) sasany. Laharana faharoa Ravalomanana, mahazo 52 na 65. Tahaka izany koa amin’ny BV any Mananjary. Nahazo 119 ny avy amin’ny TGV raha 36 ny Tim.
Tsy lavitra ny elanelam-bato
Mitarika any amin’ny faritra sasany ny filohan’ny Tim. Eo, ohatra, ny voka-pifidianana vonjimaika tany Antsirabe, Ambatondrazaka, na ny teto Antananarivo sy ny manodidina. Amin’ny biraom-pifidianana sasany, mitarika 156 na 230 ny kandidà Ravalomanana, saingy manaraka akaiky azy eo ny kandidà Rajoelina. Na izany aza, anefa notomorin’ny filohan’ny kandidàn’ny TGV ihany izany ka tsy lavitra ny elanelana.
Anisan’ny tena voa mafy sy very lavitra kosa ny kandidà Rajaonarimampianina. Mahazo vato 6 izy, ohatra, amin’ny BV iray any Morondava na koa any Toamasina, mahazo 17. Azo adika ho fanalana am-pomba mendrika ny fitondrana HVM sy tohin’ilay hiaka nalaza “Miala Rajao” teny an-kianja ihany raha izao voka-pifidianana vonjimaika izao. Mitondra am-perinasa ny tenany nefa izao nilaozan’ireo kandidà roa ireo lavitra izao sady nofaizin’ny mpifidy.
Etsy ankilany, misoko mangina ny kandidà Mailhol. Miditra laharana fahatelo na fahefatra hatrany ny tenany. Resiny hatramin’ny kandidà Rajaonarimampianina aza tany amin’ny BV hafa. Tahaka izany koa i Dama sy Rabary Paul ary i José kely. Samy nahazo vato na ambany aza izany. Hita taratra ihany ny safidin’ny olona sasany amin’ny fitadiavana olom-baovao. Tsy tazana kosa ireo Praiminisitra telo teo aloha. Anisan’izany i Mahafaly Solonandrasana sy Ravelonarivo Jean ary i Beriziky Omer.
Mivoatra arakaraka ny fahatongavan’ny voka-pifidianana
Efa mahazatra koa anefa fa na ny delege sasany aza, tsy nifidy ny kandidà nanendry azy amin’izany toerana izany.
Araka izany, ho hita eo ny ho tohiny satria mbola voka-pifidianana vonjimaika ihany ireo. Mivoatra arakaraka ny fahatongavan’ny voka-pifidianana any amin’ny faritra sy ny avy any lavitra izany.